ह्याम र बियरको साथ आर्टिचोकस - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
आर्टिचोकस एक तरकारी हो जुन मलाई धेरै मनपर्दछ, यो पनि उत्कृष्ट हो आहार.
यो नुस्खा पुस्तकबाट छ बियर संग पकाउनुहोस् थर्मोमिक्स®। यसलाई अझै बनाउनको लागि मैले धेरै परिवर्तनहरू गरेको छु हल्का.
यो संग गर्न सकिन्छ पहिले नै पकाएको artichokes र हामीले केवल चटनी बनाउनु पर्छ र अन्त्य हुनु भन्दा केही मिनेट पहिले आर्टिचोकहरू थप्नु पर्छ ताकि तिनीहरूले स्वाद लिन्छन्। म प्राय: यस तरिकाले गर्छु किनभने म तिनीहरूलाई प्राकृतिक रूपमा किन्न सँधै सम्झन्छु, मसँग सामान्यतया घरमा जार हुन्छ र बाँकी सामग्रीहरू सामान्य हुन्छन् र मसँग सधैं हातमा हुन्छ।
1 हेम र बियरको साथ आर्टिचोकस
क्यान्ड आर्टिचोकसलाई धन्यवाद जुन हामी यो बर्षो बर्ष बनाउन सक्छौं।
रेसिपी प्रकार: सब्जिहरु
१ K आर्टिचोकस
१/२ कुखुराको बोउलोन घन
१ बियरको क्यान (1० सीएल)
G० ग्राम हेम साना स्ट्रिपहरूमा काटियो
पहिले हामी यस समयमा लसुनको लौंग क्रस गर्दछौं Seconds सेकेन्ड, गति 5। हामी स्प्याटुलाको साथ पर्खालहरूमा बाँकी रहेका अवशेषहरूलाई कम गर्छौं
हामी तेल र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान र गति 7।
हामी आर्टिचोकहरू सफा गर्ने मौका लिन्छौं। हामी बाहिरबाट पातहरू हटाउँछौं र तिनीहरूलाई आधामा काट्छौं।
आटा, स्टक क्यूब र थोरै काली मिर्च थप्नुहोस् र मिश्रण गर्नुहोस् Seconds सेकेन्ड गतिमा।
हामीले पुतली ब्लेडमा राख्यौं र आर्टिचोकस र बियर थप्छौं। हामी प्रोग्राम २ मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो र चम्चाको गति।
जानको लागि घातक १० मिनेटमा हामी मुखले ह्याम थप्छौं र सेवा दिनको लागि तयार छौं।
जब म आर्टिचोकस पहिल्यै पकाएको प्रयोग गर्दछु, भाँडाबाट, म सबै चीज गर्दछु तर २ programming मिनेट कार्यक्रमको सट्टामा, मैले यसलाई १ 25 मिनेट मात्र सेट गरेको छु र minutes मिनेट बाँकी भएपछि, मैले आर्टिचोकहरू र हेम थप्दछु। साथै, यस तरिकाले तिनीहरू परिपूर्ण छन्।
स्रोत - पुस्तक बियर संग पकाउनुहोस्
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सलाद र तरकारीहरू, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » हेम र बियरको साथ आर्टिचोकस
खैर, आर्टिचोकस मेरो सबै संस्करणहरूमा मेरो मनपर्ने खाना हो ... यदि केहि आर्टिचोकस छ भने मलाई यो पहिले नै मनपर्दछ!
मैले सँधै यो रेसिपी ताजा आर्टिचोकहरूसँग बनाएँ किनभने क्यान्डहरूसँग तिनीहरू शुद्ध हुनेछन् भन्ने डरले मैले आँट गरेन, अब मलाई थाहा छ उनीहरू कसरी बनाउने!
मँ खुशी छु तपाईलाई यो मनपर्‍यो, सोनिया!
मलाई लाग्छ यो एक उत्तम नुस्खा हो, म जान्न चाहन्छु कि म फ्रोजन आर्टिचोक मुटु प्रयोग गर्न सक्दछु
नमस्ते कार्मेन, ती प्रयोग गर्न सकिन्छ, जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई पगाल्नुहुन्छ। शुभकामना।
जमेका हृदयहरूको अवस्थामा के समय पनि त्यस्तै हुने थियो? के तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यदि यो थाली एकदम सूपबाट बाहिर आउँछ? धन्यबाद र तपाईले गर्नु भएको कामका लागि बधाई, म तपाईको व्यंजनहरु मन पराउँछु। शुभकामना
नमस्ते मार्था, पहिले तपाईले उनीहरूलाई डिफ्रोस्ट गर्नुपर्नेछ र समय समान छ। यो एकदम सूपमा रहेको डिश होईन। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
हेलो इलेना, म अल क्याचोफास धेरै गर्छु तर हामीलाई थाहा थिएन कि थर्मोमिक्स सेपोडियामा यसले गर्छ।
CONCHI लाई जवाफ दिनुहोस्
उनीहरु धेरै स्वादिष्ट छन्, कोन्ची। म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। शुभकामना।
आज हामीले तिनीहरूलाई डु boat्गाबाट बनायौं र धेरै धेरै धनी !!!! Mmm
हामी सबै व्यंजनहरु लाई माया गर्छौं, धन्यवाद !!!
म जेसिकालाई धेरै खुसी छु! शुभकामना।
एलेना मैले तपाईंको पृष्ठ देखे पछि Thermomix खरीद गर्ने निर्णय गरे, र यो पनी मैले गरेको सबै भन्दा राम्रो लगानी हो। त्यसबेलादेखि मलाई पकाउन मन पर्छ, त्यस्तै महसुस हुन्छ।
मैले तपाईंलाई तपाईंको पृष्ठमा बधाई दिनुपर्दछ, मलाई लाग्छ कि यो भ्रमण गरिएको सबैमा सब भन्दा राम्रो हो, बधाई हो र हामीलाई नयाँ बच्चालाई सहयोग गर्न रोक्नुहोस्! शुभकामना
धेरै धेरै धन्यबाद, एलिसिया! म धेरै खुसी छु कि तपाईं हाम्रो व्यञ्जनहरू मनपराउनुहुन्छ। शुभकामना।
नमस्ते एलेना बियरको सट्टामा तपाई सेतो रक्सीको लागि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
के त्यो बियरले मलाई खाना पकाउन धेरै मेनिया दिन्छ
पक्कै पनि तपाईं वाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ... यो राम्रो छ, डिश अधिक धनी हुनेछ!
बाहिर निस्किनुहोस् !!!!
यो स्वादिष्ट नुस्खा को लागी धन्यवाद।
मसँग पाहुनाहरू थिए र उनीहरूले उनीहरूलाई माया गर्थे, घरमा बस्नेहरू पहिले नै सोध्दै छन् कि म तिनीहरूलाई फेरि कहिले गर्ने छु।
भिक्टोरियालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरा परिवारहरु (र म) तपाईको पृष्ठ लाई माया गर्छु !!!!
केटि आर्टिचोकस, के छोडेको छ वा एक पटक छील छ?
बीट्रियाजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार बिट्रियाज, किलो अनपील गरिएको छ, पूरै, तपाई जस्तो हरियाली खरिद गर्ने सामान किन्नुहोस्। शुभकामना!
पिलर गुज्मान लिली भन्यो
म केवल २० दिनको लागि थर्मोमिक्सको साथमा छु, र मँ अझै ढिलो छैन, के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कुन पृष्ठ पनी कुनै नुस्खा भेट्न जान सक्छु?
Pilar Guzmán Lirio लाई जवाफ दिनुहोस्
यस ब्लगमा तपाईले सबै प्रकारका र धेरै सजिलोका व्यंजनहरु पाउनुहुनेछ, तपाईले हामीलाई बताउनुहुनेछ, र स्वागत गर्दछौं ...
चकलेट ग्लेज संग कद्दू स्पन्ज केक